Ahoana no ahafahan'ny orinasanao mamadika ireo mpitsidika tranonkala tsy fantatra ho lasa mpitarika | Martech Zone
Nandritra ny taona lasa, nanandrana vahaolana isan-karazany izahay ho an'ny mpanjifanay B2B hahafantarana marina ireo mpitsidika tranonkala. Ny olona mitsidika ny tranonkalanao isan'andro - mpanjifa, mpitarika, mpifaninana, ary koa ny media - fa mahazatra Analytics tsy manome fahitana momba ireo orinasa ireo. Isaky ny mitsidika ny tranonkalanao ny olona iray dia azo fantarina amin'ny adiresy IP azy ireo. Io adiresy IP io dia azo angonina amin'ny alàlan'ny vahaolana avy amin'ny antoko fahatelo, ny fampahafantarana ampiarahina ary ny fampahalalana ampitaina aminao ho mitarika.
Ny sasany amin'ireo vahaolana nanananay dia niasa tamin'ny angona taloha, ny sasany nanana interface tsara, ny sasany tsy nanana safidy hanatsara ny tatitra… nahasosotra izany. Izahay aza dia nanao sonia fifanarahana ho an'ny vahaolana iray izay tsy mbola nanavao ny angon-drakitra na ny interface-n'izy ireo ary tsy avelany hivoaka amin'ny fifanarahana izahay. Araka ny nosoratan'ny olona ao amin'ny Demandbase, Ny famaritana ny orinasa dia sarotra noho ny nieritreretanao azy.
98% ny mpitsidika tranokala B2B aza misoratra anarana na miova mihitsy mba tsy hahafantaranao hoe inona ireo orinasa teo amin'ny tranokalanao na izay mety notadiavin'izy ireo. Ny vahaolana praiminisitra toa ny Demandbase dia manome ny fahaizana manokana ny atiny miorina amin'ny orinasa mitsidika ny tranonkalanao - milay be.
Ireo orinasa B2B dia mahita valiny tsy mampino amin'ny alàlan'ny fampiasana serivisy toa ny Demandbase. Ny hetsika ao amin'ny tranokalanao sy ny fikarohana mifandraika izay nitondra ireo orinasa tany dia ilaina amin'ny famaritana isa, ny laharam-pahamehana ary ny fahitana ny zavatra tadiavin'ilay mpanjifa na ny mpanjifa. Ny fahaizana mahita an'ity angona ity amin'ny fotoana tena izy dia afaka manampy ny ekipanao ivelany hifandray amin'ny vinavina rehefa tena manakiana indrindra ny fotoana - satria mikaroka ny vokatrao na serivisinao izy ireo.
Ny hetsika ataon'ny mpitsidika dia afaka manatanteraka fampandrenesana ihany koa, voarakitra ao amin'ny rafitra fifandraisan'ny mpanjifa (CRM) toa ny Salesforce, ary koa manao fanentanana hikolokoloana. Ity dia teknolojia mahery vaika izay mendrika hampiasa vola.
Tags: fitadiavana ip orinasamanova mpitarikamamantatra firakafantaro ireo mpitsidikamitombo ny fiovam-poInfusionsoftip fitadiavanamicrosoft dynamics crmsalesforceSugarCRMfamantarana ny mpitsidika tranonkalaWorkbooks.comZoho
Plugin bokotra fizarana sosialy tsara indrindra ho an'ny WordPress